एक योगीको स्वप्न संसार- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अक्सर जोगीहरु गुफा–तपस्वी र संसारविमुख हुन्छन् । श्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोछे भने यस मामिलामा भिन्न देखिए । यी बौद्ध गुरू संसारतिरै फर्केर, संसारमै बसेर नयाँ संसार बनाउने धुनमा छन् ।
तिब्बती गुरु झ्याड्रेल रिम्पोछेका चेला श्याल्पा रिम्पोछेको देशना छ– जीवन एक अवसर हो, आनन्द भोग गर्ने ।
वैशाख ११, २०७८ घनश्याम खड्का
लुम्बिनीमा निर्माणाधीन श्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोछेले परिकल्पना गरको महासिद्ध युनिभर्सल पिस स्याङ्चुअरी (विश्व शान्ति धाम) को थ्री–डी स्वरुप ।
झट्ट हेर्दा लाग्छ, उहिलेका कुरा खुइलिए, बितेका कुरा बिलाए, जीवन अहिलेको हो, यो पूर्णतः विगतबाट मुक्त छ । तर, खोज्दै गयो भने प्रत्येक ठाउँ, प्रत्येक मानिस विगतसँग जोडिन पुग्छ । अहिले देखिएका प्रत्येक वस्तु, मानिस र घटनाको एक्लाएक्लै अस्तित्व छैन । त्यो जोडिएको छ बितेका दिनहरूसँग, मानिसहरूसँग र घटनाहरूसँग । यहाँसम्म कि कसैका बितेका विचारसमेत हाम्रा जीवनमा निर्णायक परिघटना बोकेर आइदिन्छन् ।
अचेल तिब्बती लवजमा झोग्छेन् भनेर पश्चिमी जगत्मा प्रसिद्ध अतियोग महासन्धिका गुरु श्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोछेसँग हालै एउटा लामो कुराकानी गरेपछि मेरा मनमा यस्तै विचार आए । पच्चीस सय वर्षअघि लुम्बिनीको माटोमा फुलेको ज्ञानको कमलको सुवासले यी रिम्पोछेको जीवनलाई पनि छोएको छ ।
झ्वाट्ट हेर्दा लुम्बिनीमा जन्मे–हुर्केर बोधगयामा तपस्या गर्दा सिद्धार्थ गौतमलाई खुलेको ज्ञानले उनलाई बुद्ध बनाएको र श्याल्पा रिम्पोछेले गुम्बामा ध्यान सिकाएको कृत्यमा कुनै सम्बन्ध नदेखिन सक्छ । तर, नियालेर हेर्दा बुद्धले निर्वाण पाउनु र बुद्ध दर्शनलाई अनेक रिम्पोछेले झैं उनले पनि अगाडि बढाउनुमा एक नियमित प्रवाह भेटिन्छ, चेतनजगत्‌को ।
सिद्धार्थ गौतम बाबुको इच्छा मुताविक राजपाठमै लागेका भए धेरै मानिसको जीवनमा ध्यान र ज्ञानको बाटो पुग्ने थिएन । न बालक जिग्मेद तेन्जिङ वाङ्पो टुल्कु (कुनै सिद्ध योगीको महाप्रस्थानपछि भएको अर्को जन्म) भएको भविष्यवाणी नै गरिन्थ्यो, न उनी यसरी श्याल्पा रिम्पोछे भनेर नै चिनिन्थे ।
बुद्धको परिनिर्वाण भएको सयौं वर्षपछि दक्षिण भारतको ओडियानका योगी पद्मसम्भव र शान्तरक्षितले उनको अध्यात्म–दर्शनलाई तिब्बत पुर्‍याए । त्यतिबेलाका प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयहरू नालान्दा, विक्रमशील र ओदन्तपुरीहरू जलाइएपछि र धार्मिक दंगामा भिक्षुहरू काटिएपछि कुनै समय पूरै भारत वर्षमा फैलिएको बौद्ध धर्म भारतबाटै हरायो । यता हुरीमा हत्केलाले छोपेर जोगाएको दियोजस्तै गरी बौद्ध दर्शनको महायान र वज्रयानलाई तिब्बतले जोखाइराख्यो सदियौंसम्म । त्यसैको प्रतिफल अहिले त्यो एसिया, युरोप र अमेरिका हुँदै संसारभर पुगेको छ । तिब्बतमा कम्युनिस्ट अतिक्रमण भएपछि सन् ६० को दशकदेखि बाहिरी संसारमा पुगेको महायान र वज्रयान युरोप–अमेरिका पुर्‍याउने केही रिम्पोछेहरू छन्, जसमध्ये श्याल्पा तेन्जिङ पनि एक हुन् ।
गुम्बाहरूमा मात्रै नभएर हार्वर्डदेखि यल विश्वविद्यालयमा समेत पुगेर मनुष्य जीवनलाई सार्थक पार्ने उपायबारे बौद्ध दर्शनको सार बुझाउने गरी प्रवचन दिने यी रिम्पोछेका चेलाचेली हङकङदेखि बेलायतसम्म र चीनदेखि अमेरिकासम्म छन् । कम्युनिस्ट आक्रमणपछि तिब्बतको थातथलो खामबाट धेरै बौद्धमार्गी नेपाल हुँदै भारत र अन्यत्रका मुलुक पुगे । त्यसमध्ये नेपालको तिब्बती सीमानजिक हिमालयको काखमा एक दम्पतीको कोखमा ६ दशकअघि एक बालक जन्मिन पुग्यो, जसको नाम राखियो जिग्मेद तेन्जिङ वाङ्पो । एक वर्ष पनि नपुग्दैका तेन्जिङले एक दिन गुम्बा अघिल्तिर हात जोडेर शिर निहुराएछन् । मावलीतिरकी हजुरआमा फुन्स्टोक डोल्मा यो देखेर चकित परिछन् र लामाहरूकामा उनलाई लगेर घटनाको सविस्तार व्याख्या गरिछन् ।
‘यो बच्चा विशेष छ,’ उनीहरूले भनेछन्, ‘उनको राम्रो ख्याल गर्नु ।’ तेन्जिङ चार वर्षको पुगेपछि दुई बूढा लामाहरू कर्मा टासी र रिट्रुल रिन्जिन चोख्यालले बालक एक पवित्र र विशेष मानव भएको घोषणा गरे । तेन्जिङको ध्यानास्थ हुने बालापन देखेर उनी तिब्बततिरका एक योगीको टुल्कु भएको अनुमान गर्नेहरू बढ्दै गए । यसले बालक तेन्जिङको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्न पुग्यो । उनलाई भारत लगियो, जहाँ अहोरात्र उनले पढाइ र ध्यान गर्नुपर्‍यो ।
‘अरू साथीहरू चौरमा मस्तले खेलिरहेका हुन्थे, मलाईचाहिँ पढ्न लगाइन्थ्यो जतिखेर पनि,’ रिम्पोछेको बाल्यकालीन सम्झना छ, ‘त्यो देख्दा मलाई पनि खेल्न मन हुन्थ्यो, तर त्यसो गर्ने छुट मिल्दैनथ्यो ।’ तिब्बती बौद्ध परम्परामा टुल्कुले पहिलेको जीवनको धार्मिक कामलाई औपचारिक रूपमा निरन्तरता दिने कामलाई गद्दी आरोहण भनिन्छ, जो आठ वर्षको उमेरभित्र गरिसक्नुपर्ने मान्यता छ । तर, आफ्नो तिब्बतस्थित गुम्बामा जान सक्ने अनुकूलता नमिल्दा उनी बनारसमै पढेर बसे । अचम्म के भने भनिएजस्तै आठ वर्ष कटेपछि तेन्जिङ निकै बिरामी परे ।
‘गद्दी आरोहण नगरेसम्म उनलाई निको हुने छैन,’ छोराको सुर्ताले आँसु चुहाउँदै गुहार्न पुगेकी उनकी आमा रिन्छेन पाल्मोलाई लामाहरूले उत्तर फिराए । उनकी हजुरआमा तिब्बती अक्षरहरू पढ्न जान्दिनथिन्, तर सबै लामामन्त्रहरू भने उनलाई कण्ठस्थ थियो । नातिको स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर उनी सधैँ ती मन्त्र पढ्थिन् । तर, तेन्जिङको स्वास्थ्य सधैँ दुर्बलका दुर्बल नै रह्यो । यस्तै दुर्बलताका बीच तेन्जिङले बनारसमा संस्कृत र राजनीतिकशास्त्रमा शास्त्री पास गरे भने बौद्ध दर्शनमा चाहिँ पीएचडीसरहको अध्ययन टुंग्याए । दर्शनशास्त्रमा रुचि बढेकाले उनलाई पुनर्जन्म र औतारी कर्ममा आशंका हमेसा रहिरह्यो । तर, भविष्यवेत्ताहरूले उनको गद्दी आरोहण खामको श्याल्पा गुम्बामा छिट्टै हुने र त्यसपछि समुद्र पार पुगेर उनले ध्यान र प्रज्ञालाई फैलाउने ठोकुवा गरे । नभन्दै त्यस्तै भयो पनि । एक दिन उनी सुटुक्क ल्हासाबाट ट्रकमा चढेर दुई दिनपछि खाम पुगे, सन् १९८७ मा । तेन्जिङ चढेको ट्रक सँगसँगै माथिमाथि दुई ठूला चील पनि खाम पुगे ।
तिब्बतमा धर्मलाई रक्षा गर्ने दुई धर्मपालहरूको पूजा गर्ने चलन छ । तिनै दुई धर्मपालहरू चील बनेर ल्हासादेखि रिम्पोछेलाई श्याल्पा गुम्बामा ल्याएको विश्वास खामवासीहरूमा निशंक रूपले छायो । परिणामतः खामवासीले उनलाई गद्दीमा बसालेर श्याल्पा तेन्जिङको पाँचौं अवतार भएको उद्घोष गरे । त्यसअघि श्याल्पाका अवतार मानिएका चार लामाहरू लाम्दाक, गोन्पो रिन्चेन, दाक्पा छुल्ठिम र कर्मा दोर्जेको गद्दी आरोहण भएको थिएन । सयौं वर्षपछि तेन्जिङले चाहिँ श्याल्पाको गद्दीधारी रिन्पोचे हुने पहिलो अवसर पाए । श्याल्पाको अर्थ हुन्छ, ‘मापित’ अर्थात् राम्रोसँग नाप लिइएको । यसको तात्पर्य हो, परीक्षामा उत्तीर्ण । संसारको दुःखलाई बुझेको, यसको भ्रमित वास्तविकतालाई थाहा पाएको र कहिल्यै ननासिने ज्ञानको आलोकमा उद्भाषित हुन पुगेको चित्तलाई पनि तिब्बती शब्द श्याल्पाले संकेत गर्छ ।
बौद्ध दर्शन तिब्बतमा पुग्नुअघि वोन्पोहरूको संस्कृति चलिआएको समयमा पनि श्याल्पा शब्द प्रचलित थियो र सिद्धहरूलाई श्याल्पा नै भनिन्थ्यो । उनै प्राचीन श्याल्पा रिम्पोछेको सम्मानमा खाम नदीको किनारमा उभिएको दुई सय वर्ष पुरानो श्याल्पा गुम्बामा चिनियाँ कम्युनिस्ट सरकारको आँखा छल्दै धेरै तामझाम नगरी गुप्त रूपमा उनको गद्दी आरोहण भयो । भविष्यवाणी भएजस्तै, गद्दीमा बसेपछि श्याल्पाको स्वास्थ्यमा जादुगरी सुधार आयो । अर्को रमाइलो पनि के भने उनी खामबाट काठमाडौं फर्केलगत्तै अमेरिकाबाट धर्मदेशना गरिपाऊँ भनी निम्तो आयो ।
यसरी मध्ययौवनमा गुरु बनेर सन् १९८८ मा श्याल्पा रिम्पोछे न्युयोर्क पुगे, जहाँ उनका वर्षौं वर्ष गोराहरूलाई ध्यान सिकाएर बित्यो, बितिरहेछ । रहँदा–बस्दा उनले धेरै अमेरिकीलाई बौद्धमार्गी बनाए । तिनको प्रेमपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गरी उनी आफू पनि अमेरिकी नागरिक बने । यो तीन दशकका दौरान न्युयोर्कलाई नै स्थायी कार्यथलो बनाएर रिम्पोछेले मानव बस्ती भएका सबै महादेशहरूमा पुगी धर्मदेशना गर्न भ्याए । चेलाहरूले दिएको दानको पैसाले उनले कपनमा श्याल्पा गुम्बा पनि बनाए, जहाँबाट दक्षिण हेरे उनी बालककालमा बसेको बौद्ध देखिन्छ, उत्तरतिर हेरे तिब्बत सहर छेउछाउका हिमाली–चुचुरा मुस्कुराउँछन् । बर्सेनिजसो नेपाल घुम्न आउने रिम्पोछेका चेलाहरू यहाँ बसेर ध्यान गर्न आनन्द मान्छन् ।
उनले अमेरिकी चेलाहरूलाई दिएको उपदेशको सारसंक्षेप ‘लिभिङ फुल्ली’ भन्ने पुस्तक सानफ्रान्सिस्कोस्थित प्रसिद्ध प्रकाशन गृह ‘न्यु वर्ल्ड लाइब्रेरी’ ले सन् २०१२ मा प्रकाशित गर्‍यो, जसलाई संसारभरका पाठकले निकै मन पराए । नेपालीमा ‘प्रत्येक श्वासमा आनन्द’ शीर्षकमा अनूदित पनि छ यो ।
प्रसिद्ध तिब्बती गुरु झ्याड्रेल रिम्पोछेका चेला श्याल्पा रिम्पोछेको देशना छ, जीवन एक अवसर हो, आनन्दभोग गर्ने । प्रत्येक क्षण स्वतन्त्र छन्, जसलाई महसुस गर्न संस्कारहरूले भरिएको चित्तका कारण सम्भव हुन नसकेको मात्रै हो । सबै संस्कार अर्थात् ‘कन्डिसन’ हरूलाई फालेर संसारलाई र जीवनलाई जस्ताको तस्तै हेर्न उनी मानिसहरूलाई असंख्य तरिकाले सिकाइरहेका हुन्छन् । ‘पश्चिमाहरूमा मैले अन्तरजगत्प्रतिको अद्भुत आकर्षण देखेँ,’ रिम्पोछे भन्छन्, ‘मोक्षको कामना भौतिक पुगिसरी नभई आउन सक्दैन रहेछ, हामी बुद्धकै देशका मान्छेमा बुद्धका बारेमा ज्ञान र चासो कम भएको भौतिक दरिद्रताले नै हो ।’
उनी चाहन्छन्, आफूलाई जन्मदिने देश नेपाल नै बौद्ध दर्शनको मार्गदर्शक बनोस् । विश्वमा हराउँदै गएको शान्ति र बढ्दै गएको तनावपूर्ण जीवनको समाधान गर्ने सूत्र नेपालले नै दिन सकोस् । शान्तिका परम अन्वेषक बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा त्यो सामर्थ्य भएको उनका आँखाले देखेका छन् । ‘मनुष्य विभाजित छ, अनेक धर्म र सम्प्रदायका नाममा,’ उनी भन्छन्, ‘ती सबलाई शान्तिको अटुट स्रोतसँग जोड्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छ, त्यो पवित्र भूमि लुम्बिनी नै हो ।’
मक्कामदिनामा मुस्लिमहरू मात्रै, जेरुसेलम र वेथलहेममा यहुदी र क्रिस्चियनहरू मात्रै अनि अयोध्या तथा मथुरामा हिन्दुहरू र बोधगयामा बौद्धहरू मात्रै जाने हुँदा संसारमा सबै मान्छेका लागि साझा आध्यात्मिक ठाउँ छैन भन्छन् उनी ।
‘शान्तिका अग्रदूत बुद्धको जन्मस्थलमा नै त्यस्तो एक अवसर छ, जहाँ हामी सबै मनुष्य जातलाई ल्याउने सामर्थ्य राख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने शान्ति खोज्ने बुद्धको तरिका धर्म र सम्प्रदायभन्दा माथि छ, जसलाई सबैले पछ्याउन हिचकिचाउनै पर्दैन ।’
यही ठानेर उनी लुम्बिनीमा ‘विश्व शान्ति धाम’ निर्माण गर्ने एक स्वप्निल योजनालाई मूर्तरूप दिने प्रयासमा हालैका दिनहरू बिताइरहेका छन् । हलिउडसहित संसारभरका उनका अनुयायीहरू कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजनालाई सक्दो सघाउन लागिपरेका छन् ।
स्विट्जरल्यान्डले डावोसमा बर्सेनि विश्व अर्थतन्त्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस चलाएर आफ्नो देशको पर्यटन र कूटनीति दुवैको खुब विकास गर्दै आएको छ ।
‘नेपालले पनि लुम्बिनीमा विश्व शान्ति सम्मेलन आयोजना गरेर हरेक वर्ष संसारभरका नेतामाझ छलफल चलाउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ, नाम पनि सबतिर फैलिन्छ, बुद्धको ज्ञानबाट मनुष्य जातिले लाभ पनि लिन सक्छ ।’
सन् २०१३ बाट काम काम सुरु भएको शान्तिधामको जग बनाउने र विद्युतीय उपकरण राख्ने अजंगका सुरुङजस्ता दुई घर बनाउने काम पूरा भइसकेको छ । शान्तिधामको जगमा १७ मिटर लम्बाइ र दुई फिट गोलाइका २ सय ९० पिलरहरू बनिसकेका छन् । अबका तीन वर्षभित्र त्यसमाथि तीन तलाको जग बस्नेछ, अनि तेह्र तलाको कमलाकार श्वेत भवन खडा हुनेछ । बीचमा बुद्धकी आमा मायादेवी र उनका साथमा बालक बुद्धको ठूलो मूर्ति हुनेछ भने आधुनिक सुविधाका पुस्तकालय, १५ सय मानिस अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा अन्य सुविधापूर्ण स्थल बन्नेछन्, जहाँ निःशस्त्रीकरणदेखि विश्व शान्तिका लागि हुने प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गराउने रिम्पोछेको योजना छ । अब आउने वर्ष पूरा हुने भनिएको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट संसारभरका मानिस सिधै बुद्धको जन्मस्थल आउन सक्ने सुविधाका कारण पनि शान्तिधाममा मानिसको आवागमन सहज हुने उनी ठान्छन् ।
छोरालाई जन्म दिएपछि आफ्नो ज्यान जान्छ भन्ने तथ्य थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि आमा बन्न तयार मायादेवीलाई संसारले बिर्सेकोमा श्याल्पा रिम्पोछेलाई चित्त बुझेको रहेनछ । त्यसैकारण उनी शान्तिधाममा मायादेवीको भव्य मूर्ति कुँदाउने तयारीमा छन् । उनी भन्छन्, ‘यो संसारमा मानिस दुःखी छन् भने निष्काम प्रेमको अभावले छन् । यो निःसर्त प्रेमलाई सांसारिक प्रेम भनेर गलत नबुझियोस् भन्नका लागि बुद्धले करुणा शब्दको प्रयोग गरे ।’
‘निर्वाण प्राप्त नभई सत्त्वहरूको हित गर्ने महाकरुणाको उत्पाद हुँदैन, तर सांसारिक अवस्थामा निःसर्त प्रेम नामको करुणाको छेउछाउ पुग्ने कुनै प्रेम छ भने त्यो आमाले बच्चालाई गर्ने प्रेम हो, जसमा आसक्ति र स्वार्थ होइन, एक स्वाभाविक करुणाको बहाव हुन्छ,’ रिम्पोछे भन्छन्, ‘यही सत्यलाई संकेत गर्न लुम्बिनीमा मायादेवीको मन्दिर हुनु अपरिहार्य छ ।’
जर्मनीको संसद् भवनका डिजाइनर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट प्रोफेसर स्टिफिन ब्राउनफेल्सले रिम्पोछेको शान्तिधामको प्राथमिक नक्सा कोरिदिए । त्यसमाथि बौद्ध दर्शन झल्कने गरी प्रशस्त परिमार्जन रिम्पोछे आफैंले गरिदिए । फुलेको कमलको आकारले मनुष्यले पाउन सक्ने परम ज्ञानको अवस्थालाई, तेह्र तलाका तेह्र पत्रले ध्यानका तेह्र अलग भूमिलाई र त्यस मुन्तिरका तीन तहका जगले बुद्ध, धर्म र संघ गरी त्रिरत्नलाई संकेत गर्नेछन् ।
हरेक देशका आ–आफ्ना गुम्बाले लुम्बिनीको बृहत् क्षेत्रफल भरिएको छ । शान्तिधामलाई भने पृथ्वीवासीको साझा धरोहर बनाउने उनको परिकल्पना छ । ठूलो धनराशि खर्च हुने शान्तिधामको निर्माणमा उनलाई हजारौं शिष्यले सघाउन अघि सरेका त छन् नै । नेपालभित्र प्रतिमानिस एक रुपैयाँ र नेपालबाहिर एक डलरको मुठीदान उठाउने अभियान पनि उनले चलाएका छन् । त्यसका लागि नेपालभित्र इसेवा र नेपाल बाहिरको मुठीदानका लागि पे–पालले सेवा शुल्क नलिईकनै रकम शान्तिधामकै खातामा पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाएर सहयोग पनि गरेका छन् । एक रुपैयाँ वा एक डलर जसले पनि दिन सक्ने हुँदा यो एक निःसर्त दान हुन जान्छ । निःसर्त कर्म सानो भए पनि त्यसले खुसी ल्याउने उनको व्याख्यान सामान्यजनले मन पराएका पनि छन् ।
‘पृथ्वीमा झन्डै आठ अर्ब मानिस छन्, यीमध्ये आधाले मात्रै पनि एक/एक डलर दिए भने शान्तिधामलाई चाहिनेभन्दा निकै नै बढी कोषको जुगाड हुन्छ,’ रिम्पोछे भन्छन् । सकेसम्म बढी मानिसको सद्भाव बटुलेर शान्तिका लागि पृथ्वीमा साझा काम होस् भन्ने रिम्पोछेको कामना छ ।
यति ठूलो परिणामको काम एक्लो योगीको प्रयासमा सम्पन्न होला र भनी मानिसहरू उनीप्रति आशंका र अविश्वासका दृष्टिले हेर्दारहेछन् । उनीचाहिँ मन्द मुस्कानसहित जवाफ दिन्छन्, ‘निःसर्त प्रेमले गर्ने कुनै पनि काम न सानो हुन्छ न ठूलो नै, न असम्भव हुन्छ न अनौठो नै ।’
संसार त्यागेको जोगीलाई किन यति ठूलो काम गर्ने मन ? किन उनलाई विश्व शान्तिधाम बनाउने इच्छा ? के पाउँला भनी उनी अघि सरेका यो विधि झन्झटिलो र खर्चिलो काम अघि सारेर ? मेरा यी प्रश्नको उत्तरमा पनि उनको उस्तै सौम्य मुस्कुराहट उद्भाषित भयो । अनि उनले शान्तसँग जवाफ फिराए, ‘कुनै पनि योगीलाई संसारबाट लिनु केही छैन, उसले त दिने मात्रै हो । किनभने लिने चाह हुन्जेल तपाईं संसारको बन्धनमा पर्नुहुन्छ, दिने चाहले बन्धन तोड्छ, त्यसैले म के भन्छु भने, योगी नभई कसैले केही संसारलाई दिनै सक्दैन ।’
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ १०:१२
समयबारे हाम्रो ज्ञान र यसमाथिको पकड विज्ञानको कसीमा शून्यबराबर छ । सबै कुराको समाधान भन्ने गरिएको यो बलवान्‌को पनि बलवान् मानिएको समय आखिरमा होचाहिँ के त ?
स्थान भनेको त्यो ठाउँ हो, जसमाथि घटनाहरू हुन्छन् । अनि समय भनेको त्यो तत्त्व हो, जहाँ घटना हुन्छन् । यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् किनभने हरेक घटनाको समय छ र हरेक समयका घटनाहरू छन् ।
फाल्गुन १, २०७७ घनश्याम खड्का
गीतले भनेझैं हर युगका मानिसको आमविश्वास रहिआएको छ– समय बलवान् छ, यसले ‘कहिले हसाउँछ, कहिले रुवाउँछ ।’ अनि कहिले त, ‘आँसु र हाँसोको संगम पनि गराउँछ ।’
खरेलको झैं समयबारे अनेकन् गीत छन्, हरेक भाषामा केही कहावत बनेका छन् र हरेक पुस्ताको विचारशील मानिसले यसबारे केही न केही लेखे/बोलेका छन् । तर पनि, समयबारे हाम्रो ज्ञान र यसमाथिको पकड विज्ञानको कसीमा शून्यबराबर छ । सबै कुराको समाधान भन्ने गरिएको यो बलवानको पनि बलवान मानिएको समय आखिरमा होचाहिँ के त ?
आइन्सटाइन भन्छन्, ‘यो एक जबरजस्त भ्रम हो, जो छैन तर छजस्तो लाग्छ ।’ आइन्सटाइनले समयलाई भ्रम भन्नाको कारण के भने जेलाई हामी समय भन्छौं, त्यो खासमा त्यस्तै छैन । त्यसकारण यो भ्रमपूर्ण हिसाबले व्याख्या गरिएको र बुझिएको एक तत्त्व हो । पच्चीस सय वर्षअगाडि नै सुकरातले भनेका थिए, ‘मान्छेले फिटिक्कै बुझ्न नसकेको कुरा नै समय हो ।’ यस अवधिमा यावत् वैज्ञानिक प्रगति र मानवीय ज्ञानको बढोत्तरी भइसक्दा पनि समयप्रतिको सुझबुझ सुकरातकालीन नै छ । हो, आइन्सटाइनले सापेक्षको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा एक तथ्य अघि सारे– प्रकाशको गतिबाहेक यो संसारमा सबै कुरा सापेक्ष छन्, समय पनि ।
उत्ति नै समय कहिले थोरै र कहिले कम अनुभव हुनु यसको सापेक्षिकताको एक प्रकार भएको बुझाउन उनी एक रमाइलो उदाहरण दिने गर्थे । प्रेमि–प्रेमिकाको साथ दुई घण्टा दुई मिनेटजस्तो गरी बित्नु तर तातो चुलोमाथि दुई मिनेट पनि दुई घण्टाजस्तो भारी लाग्नु समयसापेक्ष छ भने प्रमाण हो भनेर उनले बुझाए । आइन्सटाइनले यो भावनात्मक रूपमा बुझाउन दिएको रमाइलो उदाहरण मात्रै हो । वस्तुगत रूपले पनि उही समय कहीँ ढिलो कहीँ चाँडो हुन जान्छ ।
आइन्सटाइनभन्दा अघि वैज्ञानिकहरू समय र स्थानलाई दुई स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अलगअलग तत्त्व मान्थे । उनीहरू कुनै स्थानमा भएको घटनाले समयलाई प्रभाव पार्दैन भन्ने ठान्थे । न्युटन सयमलाई निरपेक्ष रूपले एकनासको मान्थे । उनको विचारमा सबका लागि सबैतिर समय उही थियो । कसैले पृथ्वीमा एक मिनेट बिताउँछ भने त्यो एक मिनेट बृहस्पति वा अरू कुनै ग्रहमा बस्नेका लागि पनि उही लम्बाइको हुन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । अहिले पनि आम रूपमा समयबारे मानिसको धारणा यही हो ।
तर, आइन्सटाइनले यो धारणाभन्दा अलग सिद्धान्त प्रतिपादन गरे जसअनुसार, समय र स्थान दुई अलग कुरा होइनन्, बरु एकआपसमा जोडिएका तत्त्व हुन् । सोपक्षिकताको सन्दर्भमा हेर्दा खासमा समय कुनै वस्तुको गति र उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रमा निर्भर रहन्छ ।
यसको अर्थ हो– एउटा व्यक्तिको गति र गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्र अर्को व्यक्तिको गति र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभन्दा फरक छ भने ती दुईबीचको समयको गति पनि फरक हुन जान्छ । गुरुत्व र गति बढ्दै जाँदा समय ढिलो गुज्रन्छ । यो कम भयो भनेचाहिँ उही सयम छिटो गुज्रन्छ । शनिग्रहको गुरुत्वाकर्षण र गति पृथ्वीको भन्दा बढी छ । यसको अर्थ, पृथ्वीमा बस्ने कोही मानिस शनि ग्रहमा पुग्यो भने उसको उमेर ढिलो बित्छ । भन्नाले, पृथ्वीको तुलनामा उसको आयु त्यहाँ स्वतः बढी हुन जान्छ । वस्तुको गति जति बढी भयो ऊ समयबाट उति कम प्रभावित हुँदै जान्छ भन्ने सिद्धान्त आज पनि अनौठोजस्तो सुनिन्छ ।
आइन्सटाइनका अनुसार, प्रकाश नै संसारको यस्तो वस्तु हो जसको गति निरपेक्ष रूपले सबतिर समान छ, जसमा समयको असर पर्दैन । यसको अर्थ हो प्रकाशको गति सबै क्षेत्रमा समान रूपले एकैनास रहन्छ । सिद्धान्ततः कुनै मानिस प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्न सक्यो भने उसको उमेर टक्क रोकिन्छ । यसरी ठाउँ अनुसार, समय ढिलो र चाँडो हुन्छ मात्रै होइन, आइन्सटाइनले समय बाङ्गो हुन्छ भन्ने सिद्धान्तसमेत अघि सारे । समयबारे यो तथ्यगत जानकारीका कारण आइन्सटाइनपछि समय पनि एक अलग्गै आयाम मान्न थालिएको छ ।
वस्तुको हामीले देख्ने तीन आयाम हुन्– उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ । ब्रह्माण्डमा यी तीनै अनन्त छन् । जस्तो कि, तपाईं कुनै एउटा रेखालाई पूर्व–पश्चिम दिशातिर जति तान्नुस्, तान्ने ठाउँको अन्त्य हुँदैन । यसैगरी यसलाई उत्तर–दक्षिण तान्नुस्, यसको पनि सकिने सीमा
ब्रह्माण्डमा भेटिन्न । तल–माथि तान्नुस्, त्यसलाई पनि अनन्तसम्म तानिरहनै सकिन्छ ।
तीन आयामलाई मानिसले कहिल्यै बलवान् भनेन किनभने यो जति अनन्त भए पनि भेटिन्छ, देखिन्छ र सम्हालेर राख्न सकिन्छ । तर, चौथो आयाम एक–एक पलका लागि अनुपम छ, जो फर्केर आउँदैन । भोग्दाभोग्दै यो बित्छ, जसलाई समातेर राख्न सकिन्न । बालापनको अनुभव नहुँदै जीवनमा यौवनले चियाउँछ, यसको मज्जा नलिँदै बुढ्यौली भाँजो हाल्न आइपुग्छ र जीवन कतै शून्यमा बिलाएर जान्छ ।
समयलाई हामीले भूत, वर्तमान र भविष्य गरी तीन खण्डमा बाँडेका छौं । भूत त्यो हो जो बित्यो, वर्तमान बित्दै गरेको क्षण हो र बित्न बाँकी क्षण भविष्य भइहाल्यो । सामान्यतया हामीले बुझ्ने समय यही हो । आइन्सटाइन भन्छन्, ‘यहाँ तीनैथरी समय सदा विद्यमान छ, न विगत बितेको छ, न भविष्य बन्न बाँकी छ ।’ भूत, भविष्य र वर्तमान सदा मौजुद छन्, जसलाई पूर्ण रूपमा हेर्न सक्ने सामर्थ्य मनुष्यसँग नभएकाले समयको वर्गीकरण ठीकजस्तो लागेको हो ।
झ्यालबाट हेर्दा सडकमा कोही हिँडिरहेको छ, यो वर्तमान भयो । केहीपछि ऊ ओझेल पर्छ, यो भूत भयो र कोही अर्कै मानिस त्यहाँ देखिन्छ जो एक क्षणअघिसम्म भविष्य थियो । तर, छतबाट हेर्दा झ्यालको आँखाका लागि भूत, भविष्य र वर्तमान भनिएको समय र घटना सर्वथा मौजुद थियो । यस्तै, यो विश्व ब्रह्माण्डका सबै परिघटना एक अनन्त चक्रमा संगृहीत छन् जसको विगत, वर्तमान र आगत भनेजस्तो कुनै कुरा छैन, मात्र रूपहरू बदलिएर यी एकअर्कामा समाहित भएजस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छन् । अनन्तका आँखा हाम्रा नभएका हुनाले ती खण्ड–खण्ड रूपमा हामी बुझ्न पुग्छौं र दृष्टिविहीनले हात्तीको अनुभव गरेजस्तो अलग–अलग तरिकाबाट यसलाई व्याख्या गर्छौं ।
आइन्सटाइन भन्छन्, ‘हामीले ब्रह्माण्ड भन्ने गरेको एक पूर्ण (अस्तित्व) को एक अंश मात्रै हो मानिस जो समय र स्थानमा कैद छ । यो आफ्नै भ्रमित चेतनाले गर्दा आफूलाई अरूभन्दा अलग देख्छ ।’ हामीलाई आफ्ना लागेका केही थोरै मानिसप्रति मात्रै स्नेह अनुभव गर्न सक्ने बनाउने यो भ्रम नै हाम्रो कैद घर हो । यसबाट मुक्त हुन आफूजस्तै अरूप्रति पनि करुणाको प्रसार गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
उनको यो दृष्टिकोण योगीहरूका अनुभवसँग मिल्न आउँछ । योगीहरू समयको तीन खण्डबाट मुक्त हुनु र अनन्त बहावमा अक्षुण रहिरहनु नै मुक्ति मान्छन् । संसार भनेकै समयको चक्रमा परिरहनु, फेरि फेरि जन्मनु, बूढो हुनु र मर्नुको क्रमबाट उम्कन नसक्नु हो । मुक्ति भनेको समयले असर पार्न नसक्ने आनन्दको अनन्त उपलब्धि हो ध्यानीहरूको दृष्टिमा । जसरी घामले कुनै भेदभाव नराखी सबलाई ताप दिन्छ र पानीले असल–खराब नभनी सबको तिर्खा मेट्छ, यो अनन्तचेत उपलब्ध मानिसले आफ्नो पराइ नभनी सबका प्रति करुणाको प्रसार गर्छ भन्ने ऋषिहरूको मत छ ।
रमाइलो के भने, पदार्थबाट विरक्तहरूको यो अनुभवजन्य निचोडसँग पदार्थशास्त्री आइन्सटाइनको खोज मिल्दोजुल्दो छ । गहिरिएर हेर्दा समयको कुनै भूत, भविष्य र वर्तमान भन्ने विभाजन छैन, न यो स्थानबाट अलग नै छ भन्ने उनको सिद्धान्त योगीहरूले दाबी गर्ने अनुभवसँग मिल्न जान्छ ।
समय भन्नु नै स्थान हो र स्थान भन्नु नै समय हो । यो एकै तत्त्वको अलग–अलग तरिका हो बुझ्ने, अलग–अलग नाम हो बोलाउने । यो एकअर्काबाट अलग छैन, अलग हुन पनि सक्दैन । स्थान भनेको त्यो ठाउँ हो, जसमाथि घटनाहरू हुन्छन् । अनि समय भनेको त्यो तत्त्व हो, जहाँ घटना हुन्छन् । यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् किनभने हरेक घटनाको समय छ र हरेक समयको घटनाहरू छन् । कुनै एक आयाममा मात्रै यो घटित हुन सम्भव छैन । जस्तो कि, तपाईंले कसैलाई कफी पिउन स्वप्न बगैंचामा बोलाउनुभयो तर समय भन्न बिर्सनुभयो । अब के त्यो मानिससँग भेट सम्भव छ ? त्यस्तै, बिहान ११ बजे भेट्ने भनेर कुनै भेट तय भयो तर स्थान खुलाउन नपाई टेलिफोन काटियो । तब के भेट सम्भव होला ? अवश्यै पनि हुँदैन । जब समय र स्थानको टुंगो लाग्छ तब नै हामी कसैलाई भेट्न सक्छौं भन्ने तथ्य यहाँ सिद्ध हुन आउँछ ।
त्यसैले जीवन, घटना र परिवेश स्थान र समय दुवैले तय गर्ने कुरा हुन् । तपाईंले जो–जसको संगत गर्न पाउनुभएको छ, त्यो सबै तपाईंको परिवेशले भेट्ने स्थान र समयको परिणाम हो । निःसन्देह, सय वर्षपछिका मानिसले आजको जनसंख्यालाई भेट्न पाउने छैन, आजका मानिसले सय वर्षअघिकालाई देख्न सुन्न पाएनन् । स्थान उही पृथ्वी भए पनि कालको अन्तरले यहाँ कर्ताहरू फेरिन्छन् तर प्रेम, घृणा, काम, बासना, मैथुन, आहार र निद्राजस्ता प्रवृत्तिहरू उही रहन्छन् । यो हो कर्मको निरन्तरता र कर्ताको लुप्तता ।
भनिहालियो, तीन आयामझैं समय पनि अनन्त छ । फरक के छ भने, अरू तीन आयाम देखिन्छ, अनि तिनलाई पटक–पटक भेट्न र खोज्न पनि सकिन्छ । जस्तो कि उही मानिसलाई हामी फेरि पनि भेट्न सक्छौं, कतै छुटेको सामान फर्केर लिन सक्छौं, छाडेर आएको ठाउँमा मन लागे फेरि जान सक्छौं । तर, समयको पकड यस्तो छैन । यो एकरेखीय गतिमा एकोहोरो अघि बढिरहन्छ । त्यसैले दोहोर्‍याएर यसलाई भोग्न र भेट्न सकिन्न । हामी जुन क्षणबाट गुज्रन्छौं फेरि त्यो क्षणमा कहिल्यै पुग्न सक्दैनौं ।
यस दृष्टिले हेर्दा उही स्थान र वस्तुलाई पनि हामी दोहोर्‍याएर पाउन सक्दैनौं किनभने अर्कोपटक जाँदा त्यसमाथि समयको धेरथोर प्रभाव परिसकेको हुन्छ । जस्तो कि, सानो बेलाको साथीलाई भेट्दा न भेट्ने मानिस उस्तै हुन्छ, न भेटिने मानिस नै उही हुन्छ किनभने यी दुवैमाथि समयले ल्याएको प्रशस्त प्रभाव परिसकेको हुन्छ । एक क्षणपछि अर्को क्षणमा कुनै वस्तु वा मानिसलाई भेट्दा पनि भेट्ने र भेटिनेमा केही भेद आइसकेको हुन्छ तर त्यो निकै सूक्ष्म रूपमा घटित हुने हुँदा हामी त्यसलाई पक्रन सक्दैनौं र संसार नित्यजस्तो लाग्छ, जबकि यो प्रत्येक क्षण बदलिइरहेको छ । यसैलाई इंगित गर्दै योगीहरूले आइन्सटाइनकै लवजमा (आइन्सटाइन जन्मनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै) भन्दै आएका छन्, संसार एक भ्रमित वास्तविकता हो । अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने संसार भन्नु स्थान मात्रै नभएर समय पनि हो ।
आमजीवनमा समयको अर्को खास पक्ष के भने यो तन्काउन, रोक्न वा छिटो कुदाउन सकिन्न । यो आफ्नै रफ्तारमा बहिरहन्छ । त्यसैले कुनै पनि कुरा एकैपटक हुन सक्दैन । एकैपटक तपाईं पूर्व र पश्चिम फर्किन सक्नुहुन्न । एकैपटक दैडिन र बस्न सक्नु हुन्न । सबै कुरा एक–एक गरेर गर्नुपर्छ । र, त्यसो गर्दा समयको जुन हिस्सा छुट्छ, त्यो फेरि कहिल्यै फर्केर आउँदैन । त्यसैले जीवनमा जे गर्दा पनि एक किमिको हैरानी, बेचैनी र कुनै केही ननिख्रिएजस्तो भावले मनलाई चिमोटिरहन्छ मान्छेलाई । किनभने, एउटा गर्दा अर्को छुटेको हुन्छ जीवनमा । पाएको भन्दा छुटेको कुराले लोभ्याउने सामर्थ्य ज्यादा राख्छ । तपाईं सबै पाउन सक्नु हुन्न, तर सबै एकैपटक छोड्न भने सक्नुहुन्छ । पाउन कुद्नेहरू सांसारिक हुन्, जो सदा असफल प्रतीत हुन्छन्, त्यसैले ती दुःखी छन् । छाड्नेहरू योगी हुन्, जो सदा सफल हुन्छन्, त्यसैले ती आनन्दित रहन्छन् ।
स्थान वा वस्तुमा आउने परिवर्तनलाई नापेर नै हामी समयको अन्दाज गर्न सक्छौं । हाम्रै उमेर यसको एक उदाहरण हो । बच्चाहरूलाई देख्नेबित्तिकै हामीलाई जीवनको प्रारम्भिक समय मात्र बिताएको मनुष्य हो यो भन्ने सहज ज्ञान हुन्छ । त्यस्तै वृद्धहरू समयको एक निश्चित खण्ड पार गरेका बच्चाहरू हुन् भनेर कसैले भनिरहनु नै पर्दैन । यो सहज ज्ञानको जग टेकेर वस्तुमा समयको छापलाई अध्ययन गर्ने शास्त्रकै विकास गरेको छ मनुष्यले । पालेन्टोलोजी अर्थात् जीवाश्म विज्ञान त्यही शास्त्रको नाम हो । भूगर्भ, रसायन, जीव र खगोल गरी चार शास्त्रको एकमुष्ठ अध्ययन नै जीवाश्म विज्ञान हो, जसले पदार्थको अध्ययन गरेर त्यसको संसार र जीवनको इतिहास तथा समयको उत्खनन गर्छ ।
जीवाश्मशास्त्रीहरूको विश्वास छ, एक महाविस्फोटका कारण यो ब्रह्माण्डको सुरुआत भयो । सानो तर सघन ऊर्जाको कणमा एक भयंकर विस्फोट भयो । त्यसै क्षणदेखि ब्रह्माण्ड र समयको जन्म भएको विज्ञानको विश्वास छ । अहिलेसम्म यही विश्वासलाई आधार मानेर भौतिक विज्ञानले काम चलाइरहेको छ ।
ब्रह्माण्डीय पिण्डहरू एकअपासबाट टाढा जाने क्रमलाई विचार गरेर वैज्ञानिकले महाविस्फोट अर्थात् ब्रह्माण्डको जन्मको अन्दाजी समयको आकलन गरेका छन् जो १३ अर्ब ८० करोड अगाडिको हुन आउँछ । यो सिद्धान्तले भन्छ, प्रत्येक क्षण आकाशीय पिण्डहरू एकआपसबाट टाढा गइरहेका छन्, अर्थात् ब्रह्माण्डको प्रसारण अनवरत रूपमा भइरहेको छ । वैज्ञानिकहरू भन्छन्, कुनै दिन यस्तो अवस्था आउनेछ जहाँ पिण्डहरूबीचको दूरी बढेर उनीहरू एकअर्काबाट टाढा जानेछन्, महादुरीको कारणले उनीहरूबीचको सम्बन्ध टुट्नेछ, ब्रह्माण्डीय सन्तुलनमा खलल आउनेछ र चराचर जगत्को अन्त हुनेछ, अर्थात् समय हराउनेछ ।
वैज्ञानिकहरूको अर्को तर्क पनि छ, ताराहरूको मृत्युले जन्म भएका भयंकर डरलाग्दो कृष्ण विवर (ब्ल्याक होल) को विस्तारले ब्रह्माण्डका सबै पिण्डहरूलाई आफूमा समाहित गर्न पनि सक्छ, यो विशाल ब्रह्माण्ड फेरि शून्यमा फर्किन सक्छ अनि समय निभ्छ अर्थात् संसार सकिन्छ । त्यो हुने बेलासम्म हामी यो जुनीबाट बिदाबादी भई या त अध्यात्मले भनेजस्तो अनेक जुनी लिइसकेका हुनेछौं या भौतिकवादीहरूले भनेजस्तो कुनै ढुंगा, माटो वा केही पदार्थमा परिणत भएर अर्बौं वर्षको एक फोसिलका रूपमा पाइनेछौं, जसको सालाखाला आयु जीवाश्मशास्त्रले पत्ता लगाउन सक्नेछ । अहिले नै भने यो समय र स्थानमा हामीलाई अनेकन कुराको चाप छ जसमा शान्तपूर्वक बाँच्नु हमेसा एक चुनौती हुन गएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ ११:०७